သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအချိန်လေး - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ•မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ
"သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏ" ဟုမေး & ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် စကားလုံး မဂ္ဂဇင်း။ 1906 နှင့် 1916 အကြားအောက်ပါမေးခွန်းများကို၏စာဖတ်သူများကအန္တရာယ်ခဲ့ကြသည် စကားလုံး နှင့်မစ္စတာ Percival တို့ကဖြေသည်။ အောက်ကနေ့စွဲများသည်ဤမူလမေးခွန်းများနှင့်အဖြေကိုအပေါငျးတို့သ unabridged ပြန်ထုတ်ပေးပြီးရှိရာတစ်ဦးချင်းစီ PDF များမှလင့်များဖြစ်ကြသည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာစစ်မှန်ထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်, မည်သည့်သတ်ပုံအမှားများကိုထိုကာလအတွင်းမှာရေပန်းစားပုဒ်ဖြတ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူထိန်းသိမ်းထားပါပြီ။ ထိုရက်စွဲအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းများအသီးအသီးမှအဖြေကိုဝင်ရောက်ဖို့အောက်ကမီးမောင်းထိုးပြရက်စွဲများပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
တစ်ဦး Theosophist ယူသီးမှုအတွက်ယုံကြည်ပါသလား
a "ကိုဖုံးသောအမြှေး" နဲ့မွေးဖွားများထဲမှအချို့အဘိဥာဏ်ဒြေသို့မဟုတ်မှော်အတတ်တန်ခိုးအားအပိုင်စေခြင်းငှါ၎င်းအယူသီးမှုအတှကျအရှိအဘယ်အရာကိုအခြေခံပါသလဲ
တစ်ဦးအတွေးအခြားစိတ်ကိုမှကူးစက်စေခြင်းငှါ အကယ်. ဒီအဖြစ်တိကျစွာပြုသောအမှုများနှင့်အတူမအဘယ်ကြောင့်, အဖြစ်သာမန်စကားပြောဆိုမှုအဖြစ်အများကြီးထောက်လှမ်းရေးအပေါ်ယူသွားတတ်၏?
တစ်ဦး Theosophist တစ်သက်သတ်လွတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အသားစားချင်သောသူ၏ပလား?
မည်သို့အမှန်တကယ် theosophist သူ့ကိုယ်သူတစ် theosophist ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်နေဆဲကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်၏အလိုဆန္ဒများကြောင့်စားသူတဦးတည်း၏ခန္ဓာကိုယ်မှတိရစ္ဆာန်၏အသားထံမှလွှဲပြောင်းဖြစ်ကြောင်းသိကြရသောအခါအသားကိုစားနိုင်မလဲ?
ကအိန္ဒိယ Yogi နှင့်ဘုရားသခငျ့မှီ၏ယောက်ျား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင်းစကားမှန်သည်မဟုတ်, ကိုယ်အသားကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်လည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့သူသည်မှန်လျှင်, သငျ့သညျကိုမသောသူတို့ကို?
theosophists နှင့် occultists အားဖြင့်ဤမျှလောက်များစွာသောဆက်သွယ်မှုအတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဒြပ်စင်၏အတိအကျအဓိပ္ပာယ်ကိုကဘာလဲ?
အဘယ်အရာကို "လူ့ကို elemental" ကိုဆိုလိုသနည်း ဒါဟာနှင့်အောက်ပိုင်းစိတ်ထဲအကြားမည်သည့်ကွာခြားချက်ရှိပါသလား?
အဆိုပါအလိုဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်ရှိတစ်ဦးကို elemental အခြား, အရေးကြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားအခြားဟာခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းချုပ်ထား, ဒါမှမဟုတ်သမျှသောဤလူ့ကို elemental ထိန်းချုပ်မှုမရှိသလဲ?
အဘယ်အရာကိုကို "တတိယမျက်စိ" ဖြစ်ပါတယ်နှင့် clairvoyant နှင့် occultist အသုံးပြုရန်သနည်း?
ခရစ္စမတ်တစ် theosophist မှမဆိုအထူးသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိသည်, ဒါလျှင်အဘယ်ပါသလား?
အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအစား Jesusmass သို့မဟုတ် Jesusday ၏, ဒါမှမဟုတ်တခြားနာမည်ဖြင့်ခရစ္စမတ်ဒီဇင်ဘာလ၏ 25th, ဒီကိုခေါ်သလဲ?
ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်အသက်တာကိုနားလည်သဘောပေါက်တစ်ခု esoteric လမ်းရှိပါသလား?
သင်တစ်ဦးနိယာမအဖြစ်ခရစ်တော်၏အမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ သငျသညျယရှေု, နဲ့ခရစ်တော်ခြားနားစေသလား?
ယေရှု၏မွေးဖွား၏အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ၏ 25th နေ့ကကျင်းပအဲဒီမှာအဘယ်အရာကိုအထူးသဖြင့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သနည်း
ကခရစျတျောဖြစ်လာမှလူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါလျှင်, ဘယ်လိုပြည့်စုံသည်နှင့်မည်သို့ဒီဇင်ဘာလ၏ 25th တစ်ရက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်သလဲ?
အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကုသဖြစ်ပေါ်လာအောင်မပြုခဲ့လျှင်ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသသာယာဝပြောတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဖြစ်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကိုယ်စားပြုသောအရာကိုမဟုတျပါလျှင်, သူတို့ရဲ့လူနာများကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်လော
ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယှက်ကုသမှုအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ပေးခြင်းများအတွက်ပိုက်ဆံလက်ခံရရှိရန်မှားယွင်းနေသည်ဆိုပါက "သိပ္ပံပညာသင်ကြားရေး," ကကျောင်းမှာဆရာမသင်ယူမှု၏အကိုင်းအခက်မဆိုအတွက်ကျောင်းသားညွှန်ကြားချက်အဘို့ပိုက်ဆံလက်ခံရရှိရန်အတွက်လည်းမှားယွင်းနေသည်မဟုတ်လော
(အယ်ဒီတာတစ်ဦးစာတစ်စောင်မှာမတ်လ 1907 "သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏ" ဟုမစ္စတာ Percival. -Ed မှနေတုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, critiqued ဖြစ်ပါတယ်။ )
ဒါကြောင့်မှန်သည်ဆိုပါက Mana မှုခွံ, spooks နှင့်အဖွဲ့အစည်းများသော်လည်းအဘယ်သူမျှပေါ်လာကြောင်း, theosophical သွန်သင်ချက်အရသိရသည် seances မှာဘယ်တချို့နတ်ကတော်ခြောရရှိထားသည့်မကြာခဏအတွေးအခေါ်နှင့် theosophical သဘောသဘာဝ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်သွန်သင်ချက်တွေကိုလာသလဲ
မည်သို့သေလွန်သောသူတို့သည်မှာအားလုံးပါလျှင်, စားပါသလဲ အဘယ်အရာကိုသူတို့ရဲ့ဘဝထောက်?
သေလွန်သောသူတို့သည် wear အဝတ်ပါသလား
ဗဟိုရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏နေရောင်နှင့်၎င်း၏ဂြိုလ်ဆုံလည်ခံရဖို့ဟန်န်းကျင်မည်သူမဆိုသိကြပါသလား? ငါက Alcyone သို့မဟုတ် Sirius ဖြစ်အံ့သောငှါကိုဖတ်ပြီးကြပါပြီ။
အဘယ်အရာကိုတဦးတည်းရဲ့နှလုံးစည်းချက်စေသည်; ဒါကြောင့်လည်းအဘယ်အရာကိုအသက်ရှူအကြောင်းကို, နေရောင်ကနေလှိုင်းတံပိုး၏တုန်ခါမှုဖြစ်သနည်း
နေရောင်ဒါမှမဟုတ်လ catamenial ကာလထိန်းညှိသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ပါသလား? မရလျှင်အဘယ်သနည်း
လူ့ Karma, ဒါမှမဟုတ်ကံကြမ္မာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အလုပ်ခန့်သည့်ဂြိုဟ်လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသလား သို့ဆိုလျှင်အဘယ်အရပ်အခမဲ့အတွက်လာကြလိမ့်မည်သနည်း?
အချိန်ဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်ပဉ်စမနေ့ (ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်န်းကျင်သူတို့ရဲ့ကယ်များ၏မွေးဖွားဆင်နွှဲသူကိုမဆိုလူတွေရှိပါတယ်လျှင်သင်နေရောင်နိမိတ်လက္ခဏာ Capricorn ရိုက်ထည့်ဖို့ကဆိုပါတယ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်မလား?
ဒါဟာခရစ်တော်၏မွေးဖွားဝိညာဏမွေးဖွားကြောင်းအချို့တို့ကဆိုပါတယ်။ ဒီဒါသည်ဆိုပါက, အဘယ်ကြောင့်ခရစ်စမတ်ဝိညာဉ်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆအလွန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောပစ္စည်းလမ်း, စျ, စားသောက်သဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်များအတွက်ကျင်းပကြောင်းဖြစ်သနည်း
Vol ၏ "သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏ" ၌။ 4, စာမျက်နှာ 189, ကခရစ္စမတ်ကဆက်လက်အဖြစ်, အရာ, "အလင်း၏မမြင်ရတဲ့နေရောင်၏မွေးဖွား, ခရစ်တော်နိယာမ" ကိုဆိုလိုသည်ဟု "လူအတွင်း၌မွေးဖွားခံရပါ။ " ဒီဒါသည်ဆိုပါက, ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပေ ယေရှု၏မွေးဖွားဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်ငါးရက်နေ့တွင်လည်းရခဲ့သလဲ
သငျသညျနီးပါး 2,000 နှစ်ပေါင်းကမ္ဘာကြီးဟာဒဏ္ဍာရီယုံကြည်သောခဲ့ပြီးခရစ်တော်၏ဘဝတစ်ဒဏ္ဍာရီကြောင်း, ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သမိုင်းတစ်ဦးဒဏ္ဍရီပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏ဟုပြောနှင့်ဆိုလိုပါသလား
astral ဥာဏ်ပညာကိစ္စမှတဆင့်မြင်နေနိုင်စွမ်းမှန်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအလတ်စားမရှိဝိညာဉျကိုထိန်းချုပ်ယခုနာမည်ကြီးလိမ္မော်ရောင်ရေတွက်စမ်းသပ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်းကိုလဲ?
အဘယ်အရာကိုရှင်းပြချက်ဒါမကြာခဏပေါ်ပေါက်သောကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြေငလျင်များအတွက် Theosophy ကမ်းလှမ်းမှုကိုတတ်နိုင်သမျှနှင့်အရာကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုဖကျြဆီးနိုငျသလဲ
သငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏ကိစ္စပေါ်မှာလူလုပ်ရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတှေးအထိုကဲ့သို့သောခြင်္သေ့, ဝံ, ဒေါင်း, အမွီးကခလောကျသံပွုတတျသောမွှေဆိုးအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်မှသကဲ့သို့မည်သို့မည်ပုံပိုပြီးအပြည့်အဝမရှင်းပြနိုင်ပါသလား?(ဤမေးခွန်းတစ်ခုကို Percival ရဲ့အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကိုရည်ညွှန်းသည် စိတ်ထင်။ -Ed မှ။ )
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဘယ်အရာကိုမှတ်အတွက် astral လောကဝိညာဏအကှာခွားသနညျး ဤဝေါဟာရများကိုမကြာခဏကဤဘာသာရပ်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စာအုပ်တွေနဲ့မဂ္ဂဇင်းအတွက်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြု, ဤအသုံးပြုမှုကိုစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ကိုရောထွေးဖို့ apt ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသီးအသီးအင်္ဂါတစ်ရပ်အသိဉာဏ် entity ဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကအလိုအလျှောက်၎င်း၏အလုပ်လုပျသလဲ
ဒါဟာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဆနျ့ကငျြထင်မြင်ချက်များဆိုအမှန်တရားကိုရည်မှတ်ညာဘက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်မထင်ထားဘူး။ အဘယ်ကြောင့်အချို့သောပြဿနာများသို့မဟုတ်အမှုအရာအရာမှာဤမျှလောက်များစွာသောထင်မြင်ယူဆချက်ရှိသနညျး ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဖြောင့်မတ်သောအထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြနိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမှန်တရားဖြစ်သနည်း
ငါတို့သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ ATMA-buddhi နှင့်အတူပြည်ထောင်စုအတွင်းဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
မှောင်မိုက်ကိုအလင်း၏မရှိခြင်းသည်, သို့မဟုတ်ပါကသူ့ဟာသူအတွက်သီးခြားအရာတစ်ခုခုသည်နှင့်အလင်း၏အရပျကိုယူပြီးသော? သူတို့ကွဲပြားနှင့်သီးခြားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှောင်မိုက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အလင်းဖြစ်၏ကဘာလဲ?
radium, ဘယ်လို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အာဏာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မဆိုသိသာစွန့်ပစ်အရှုံးမရှိဘဲအဆက်မပြတ်တို့သည်ကြီးစွာသောစွမ်းအင်ကိုချွတ်ပစ်ရန်, နှင့်၎င်း၏အလွန်ကြီးစွာသောရေဒီယိုသတ္တုကြွ၏အရင်းအမြစ်ကဘာလဲထိုသို့ဖြစ်နိုင်ကဘာလဲ?
အခြားမည်သည့်လူသိများမျိုးစိတ်ထံမှလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနှင့်ကွဲပြားဟင်းသီးဟင်းရွက်, သစ်သီးသို့မဟုတ်စက်ရုံတစ်မျိုးစိတ်အသစ်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား? ဒါကြောင့်ဆိုပါကမည်ကဲ့သို့ပြုမိပါသလဲ?
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသည်မြွေကွဲပြားခြားနားသောလူများကဒါကွဲပြားခြားနားမှတ်သလဲ? တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးသည်မြွေသည်ပညာ၏သင်္ကေတအဖြစ်ကိုအခြားအချိန်များတွင်, မကောင်းသောများ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၏ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားသည်မြွေ၏ထိုကဲ့သို့သောဟာမွေးရာပါကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အပိုင်သနည်း?
နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများလေယာဉ်မဆိုအပေါ် observable ဖြစ်ပါသလား
အရောင်များ, သတ္တုနှင့်ကျောက်ခဲတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားသင့် wearer မွေးဖွားခဲ့သည်ထားတဲ့အောက်မှာကြောင်းဂြိုဟ်ရဲ့ရှုထောင့်ကဆုံးဖြတ်ရမည်လော
အရောင်များ, သတ္တုနှင့်ကျောက်များမဆိုအထူးသီလရှိသည်, ဘယ်လိုသူတို့ကဂြိုလ်နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲဝတ်ဆင်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
အဘယ်အရာကိုစာလုံးများသို့မဟုတ်နံပါတ်များဂြိုလ်တွဲသို့မဟုတ် ascribed နေကြသနည်း
မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုလူရဲ့အကြိုက်နှင့်မကြိုက်ထင်ဟပ်ဖြစ်ပါသလား သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လောက်သူတို့ကရောင်ပြန်ဟပ်နေကြသနည်း မထားလျှင်, အဘယ်ကဤအကြိုက်နှင့်မကြိုက်ငှါလာသလော
အနံ့၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြုမူသလဲ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုန်ဟာအာရုံ၏ထုတ်လုပ်မှုထိတွေ့ဆက်ဆံဘူး, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလူနေမှုအတွက်ကစားအနံ့သနည်း?
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အဘို့အ proselytize ကြှနျုပျတို့ကိုတိုကျတှနျးထား? အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိကျမတို့တခြားသူတွေရဲ့သူတို့အားကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ဆန့်ကျင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသနည်း
နှစ်ဦးစလုံးအခိုင်အမာမျှသာယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာလက်ခံခဲ့သည်ခံရဖို့ရှိသည်အတွက်ငရဲမှာတစ်ဦးလက်စားချေသောကြောင့်ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ Theological ကြေညာချက်နဲ့တန်းတူ, karmic လက်စားချေအဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ Theosophical အယူဝါဒမျှမက, နှင့်နောက်ထပ်တစျကငျြ့ဝတျကောငျးမွတျထုတ်လုပ်ရန်အခြားအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. အဖြစ်ကောငျးသလဲ.